Ukusebenzisa ukufana ekhishini akuyona inketho abahamba phambili ngokuya ngezinqubomgomo, ziphephe futhi ukonga. A isisombululo - Piezo umentshisi egesi endzaweni lephephile.
imikhiqizo eziningi zanamuhla ephathekayo ukuze kutholakale ilangabi babe izibambo elula futhi uphafuza. Ngakho-ke, ukukhanyisa sikaphalafini nokuba khona phezu kwesitofu noma izitsha kuhhavini ngosizo kumadivayisi ezifana Kuyinto elula kakhulu.
Le divayisi enemisebenzi ukuthi usebenza ngaphandle insengetsha, isidingo ukushaja eyengeziwe noma lingatshajwa, ukufinyelela amapayipi. Piezo umentshisi egesi isitofu ifakwe zinhlayiya bafake ukumelana ngokuphila service kulinganiswa emashumini eminyaka. Amadivayisi walolu hlobo ziphephile ukusetshenziswa ekhishini babe ergonomic komzimba, elula futhi mobile.
Ukulungisa Piezo umentshisi kuphela edingekayo uma isisetshenziswa ukukhathala yeseli main, okuyinto obangela ukukhiqizwa Sparks. Esimeni eziyimbangela yezinkinga ezizuzwa ungazami self-alulame. Njenganoma iyiphi into yokwenza, Piezo umentshisi egesi izitofu kufanele libuyiselwe onguchwepheshe. Ngale ndlela yokuxazulula le nkinga iyabheda kusindisa hhayi kuphela isikhathi namandla, kodwa futhi imali.
kudivayisi Piezo umentshisi
Ukuze kokhela igesi, ngokwanele ukuletha umlomo wombhobho obukhethekile oxhumana nabo sikaphalafini kanye ngokuchofoza. Kodwa yini ephakathi Piezo umentshisi esebenza ngesisekelo siphi isimiso?
Ngaphakathi uma imikhiqizo elivuthayo umlilo esitofini igesi futhi isici piezoelectric izintambo wahlela. okuhambisa Kugcine futhi kukhulisa ingcindezi evela izinkinobho idivayisi. Amandla ngaphezulu sisetshenziswa uma uchofoza, ayanda nokwehlukana wiring ngaphakathi iKhabhinethi.
Umklamo we element central ulula. Siqukethe amasilinda ezimbili metallic exhunywe ngokulinganisa. Omunye wabo uba electrode kahle icala, ekupheleni okuyinto okukhiphayo ukwanda ngesimo izintambo. Lolu dengezi esisele omubi icala futhi Uthintanise ngesikhathi ingcindezi inkinobho. Phezu kusebenze Piezo Lighters oxhumana nabo gas osenyameni amapuleti okukhiphayo, okuyinto wokhela sikaphalafini igesi lapho turning.
Ngesisekelo lolu hlobo amadivayisi kuyinto igobolondo igesi futhi indlela ukuze excision ka inhlansi. Ngokungafani pezozazhigalok, igesi zidinga refilling gqwa esikhundleni Silicon isici lapho abraded.
I ethile eyinhloko igesi Imishini - explosiveness. Ukuze ugweme ukuthungela emva olandelayo ukushaja igesi kube lula, kutuswa ukuba abe nekhefu imizuzu eminingana ngaphambi kokuba ukusetshenziswa. Futhi, ungashiyi lezi amadivaysi iseduze izinto ezishisayo namalangabi evulekile.
Ngokuvamile, lezi zinto kancane ngoba indlu ongakhonza amashumi eminyaka. Ngezinye ukugcinwa kanye nokusebenza njalo izidingo ukuhambisana kumadivayisi ephathekayo abanjalo bangabaphostoli elula kakhulu futhi enokwethenjelwa.
umentshisi okunjalo anikwe amandla kusuka esitolo ejwayelekile kagesi. Ukusebenza kusekelwe sokuvalwa ezilandelanayo nokuvulwa iketango bedle ensimini kagesi kwi induku. Ukwenza inkinobho kuholela osenyameni enamandla besikhashana. inhlansi njengomhlambi kwenza ukukhanyisa ilangabi.
Njengoba Piezo umentshisi egesi endzaweni lephephile, kagesi kudivayisi libhekene lula ukusebenza, ukuqina, kanye nokwenzeka osheshayo nokusha flame ngaphandle isidingo okufanayo.
Phakathi amaphutha elektrozazhigalok uzinake exhunywe kwamandla, ukuntuleka kwamathuba ukusebenzisa ngesikhathi ugesi. Phakathi kwezinye izinto, kukhona kungenzeka esimweni esiyingozi uma kwenzeka ilangabi nomthelela oxhumana kagesi. Ukuvumela yobudedengu ngesikhatsi operation kungabangela short circuit.
Basebenta ku amabhethri, okwenza lezi amadivaysi ephephile kakhulu ukusebenzisa. Izinto ezincane umklamo indlu ehlukene esekelwe transducer ishayela. Ukucindezela up transformer icushiwe esibangela sebuningini izinhlansi kuqhathaniswa ababuthakathaka, okushisa okuyinto anele ukuthungela elangabi.
zobuchwepheshe ukuze kwesitofu ngekhwitjhini kukhona elula lusetshenziswa nsuku zonke. I ethile kuphela lapha kungase kubhekwe njengokwelapha ematfuba umonakalo kungxenye ukuthungela ku contact umswakama, amafutha noma udoti.
onobuhle Iningi samanje igesi izitofu anemisila okuhlangene nezinto zikagesi ukuba kukhululwe izinhlansi okwenza kungabi nesidingo lighter noma okufanayo.
Ogogo nomkhulu Day eRussia. Yeka ukuthi yaba isipho ukunikeza ugogo nomkhulu